တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး - People Media Myanmar
Home တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ – ၂၂ (People Media)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Alexander V.FOMIN ၊ရုရှားတပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများနှင့် ရုရှားနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့ တက်ရောက်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့သည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
#PeopleMedia #ရုရှား #မြန်မာ
တပျမတောျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏျပွုကွိုဆို၊ တှေ့ဆုံဆှေးနှေး
နပွေညျတောျ၊ ဇနျနဝါရီ – ၂၂ (People Media)
တပျမတောျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျး နိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနေ့နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတောျရှိဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွင့ျကွိုဆိုသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတောျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှင့ျအတူ ဒုတိယတပျမတောျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး
မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြောျနှင့ျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတောျအရာရှိကွီးမြား၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျမွင့ျနှယျတို့ တကျရောကျကွပွီး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေး ဝနျကွီးနှင့ျအတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV၊ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ဒုတိယကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Alexander V.FOMIN ၊ရုရှားတပျမတောျမှအရာရှိကွီးမြားနှင့ျ ရုရှားနိုငျငံစဈသံမှူးတို့ တကျရောကျသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတောျကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှင့ျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီး တို့သညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧည့ျခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံဆှေးနှေးခဲ့သညျ။
#PeopleMedia #ရုရှား #မွနျမာ
« YRTA ကထွက်သည့်စာသည် ယာဉ်လိုင်းနဲ့ ခရီးသည်တွေကြား ရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်နေကြောင်း YRTA ကို တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်သည့် အေးချစ်မြိုင်ယာဉ်လိုင်း
မြန်မာတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသူများကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကားငယ်များဖြင့် လူကုန်ကူးမှုများရှိလာ »